११ वर्ष भयाे उमा, तिम्राे यादमा आँशु अझै किबोर्डमा खसिरहन्छन्
जनकपुरधामको गंगासागर पोखरीको दक्षिणी डिलमा रहेको स्वर्गद्वारी श्मसानघाटमा पत्रकार महासंघका तत्कालीन सभापति धर्मेन्द्र झा भक्कानो फुट्ने गरी रुँदै चिच्याउँदै थिए । मेरो नजिक आएर उनी रोइरहँदा मैले पनि मन थाम्न सकिनँ ।
यसरी उनी रुनुको पछाडिको कारण भनेको २७ पुस, २०६५ मा रेडियो टुडेकी चर्चित समाचारवाचिका तथा स्वतन्त्र लेखिका उमा सिंहको हतियारधारी समूहद्वारा कायरतापूर्वक हत्याको वियोग थियो ।
झासँगै हिमाल खबर पत्रिकाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षित, नारायण वाग्ले, शिव गाउँले, संचारकर्मी प्रशान्त झा, यशोदा तिमिल्सिना, जनकपुर टुडेका सम्पादक वृजकुमार यादव, जनकपुर एक्सप्रेसका रामभरोष कापडी, वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली सबैका आँखा रसाएका थिए । यसरी संचारकर्मी मात्रै होइन, उमाका सहकर्मी, शुभचिन्तक, परिवारजन सबै चिच्याउँदै विलाप गर्दै थिए ।
उमाको अन्तिम संस्कारको दृश्य मेरो आँखाले कैद गरिराखेका थिए । म काम गर्ने रेडियो टुडे र जनकपुर टुडेमा कार्यरत थिइन्, उनी । त्यसैले उनीसँग बिताएका कतिपय स्मरणीय क्षणहरू छन् । तर, ती सबैलाई उल्लेख गर्न मसँग सामर्थ्य छैन । यद्यपि, केही स्मरणहरूलाई उल्लेख गरिरहँदा मेरा आँखाबाट थोपाका थोपा आँशु किबोर्डमा अविरल झर्दै छन् । उनको हत्या भएको ११ वर्ष भयो । स्मृतिमा श्रद्धाञ्जलिका दुई पुष्प उमाप्रति समर्पित गर्न म विवश छु ।
उनीसँग बिताएका उल्लेखनीय धेरै क्षणहरू छन् । कुरा २०६५ पुस २७ गते आइतबारको हो । जुन साँझ उनको बीभत्स हत्या गरियो । म सधैँ ढिलो गरी ११–१२ बजेतिर कार्यालय पुग्थेँ । तर, उमा मभन्दा अघि साढे ९ बजेदेखि नै अफिसमा समाचार वाचन गर्न र लेख्नमा व्यस्त हुन्थिन् । त्यो दिन अफिस पुग्दा व्यस्तताको कुनै पर्वाह नगरी उमा कुर्सीमा बसेर मज्जाले गीत सुन्दै थिइन् । गीत थियो– जीवला प्राण हम कतसँ बेसाही अर्थात् बाँच्नलाई प्राण कहाँबाट किन्नु ?
मलाई हेर्नेबित्तिकै उनले 'सर नमस्का' भनिन् । मैले पनि नमस्कार फर्काएँ । उनको फुर्सदका कारण अरु केही नभएर लोडसेडिङ र नेटमा समस्या देखिएकाले हो । मैले यो मौकालाई सदुपयोग गर्दै कुराकानी अघि बढाएँ । उनले भनिन्, ‘सर तपाईंहरूसँग (अंग्रेजी कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप झा, सञ्चारकर्मी बटुक नाथ झा) हिजो साढे ४ बजेतिर सामाजिक, सांस्कृतिक विषयमा जुन कुराकानी भयाे, त्यसले मेरो मनलाई हलुङ्गो मात्रै बनाएन, म आज बिहान ८ बजेसम्म मस्त निद्रामा निदाएँ ।’
सधैँ रातिराति नसुत्ने र आफ्नो परिवार तथा बुबा र दाइको हत्याको पीडामा गल्दै गएकी उमाले हामीसँग कुरा गर्दा उनको मन हलुङ्गाे हुन्थ्यो । जहिले पनि समाचारका लागि बेचैन हुने र स्वस्थ, निर्भीक, साहसिक तथा जनहितमा समर्पित पत्रकारिता गर्ने उनी हामीसँग सुखदुःखका, हाँसो र रोदनका कुरा शेयर गर्थिन् । उनी मसँगै रेडियो टुडेको सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम ‘गरमागरम चाह’ पनि चलाउँथिन् ।
केही दिनअघि मात्र ‘गरमागरम चाह’ को नियमित संचालक वृजकुमार दाइ जनकपुरभन्दा बाहिर रहनुभएकाले म र उमा नै कार्यक्रम चलाउँदै थियौँ ।
अहिले तीला संक्रान्तिको समय हो । मिथिलामा बहिनीकहाँ च्युरा, मुरही र तीलका लड्डु कोसेली लैजानुपर्ने परम्परा छ । 'मेरा पनि पाँचवटा बहिनी छन् । बहिनीकहाँ कोसेली पुर्‍याउन जान्छु । म भोलि आउँदिनँ उमा, तिमी एक्लै कार्यक्रम चलाउनू', मैले यति भनिनसक्दै बीचमै निश्छल र सहज स्वरमा उनले भनिन्, 'सर हाम्रा लागि पनि च्युरा है !' 'हस्, हुन्छ', मैले जवाफ फर्काएँ । उनी कसैको भोज भतेर, चिया, नास्ता खाँदैन थिइन् ।
यसरी पत्रकारितामा संघर्ष, समर्पण, उच्च मनोबल तथा दृढ संकल्पका साथ अघि बढिरहेकी उमाका समाचार लेख्ने हात मात्रै होइन, कार्यक्रम चलाउन स्वर निकाल्ने गला पनि ती क्रुर अपराधीहरूले साँझ सवा ७ बजे रेटे । समाचार संकलन गर्ने उनको खुट्टा पनि छिनालियो । क्षत्‌विक्षत् अवस्थामा रहेकी उनलाई स्थानीय केयर मेडिकल सेन्टरमा उपचार सम्भव नदेखिएपछि चिकित्सकहरूको सुझावअनुसार थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजाने क्रममा बर्दिबासमा राति सवा ११ बजे उनले मृत्युवरण गरिन् ।
यस दुःखद सामाचारले म निकै स्तब्ध भएँ । तर पनि उमाले रोजेको साहसिक र निष्पक्ष पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्दै पोष्टमार्टमका लागि उनको पार्थिव शरीरलाई राखिएको जनकपुर अञ्चल अस्पताल, शवलाई नगर परिक्रमा गराउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा गरिएको धर्ना तथा अन्त्येष्टिलगायतका सम्पूर्ण समाचार संकलन गर्ने क्रममा २९ पुस, २०६५ मा श्मसानघाटमा उपस्थित सम्पूर्ण शुभचिन्तक, सञ्चारकर्मी, परिवारजनलगायत व्यक्तिहरूको मुख अगाडि रेकर्डर राखेर आवाज लिएँ । यो गर्न मलाई असाध्यै गाह्रो भइरहेको थियो ।
म मात्र होइन, सबै रोएका थिए । कति त छिनछिनमै बेहोससमेत हुने गर्थे । यसै क्रममा चिच्याँउदाचिच्याँउदै बेहोस हुने गरेकी उनकी आमालाई सोधेँ, 'काकी अब तपाईं के चाहनुहुन्छ ?'
उनले बेस्सरी चिच्याउँदै भनिन्, 'मलाई मेरी उमा चाहिएको छ ।'
आफूलाई थाम्दै हृदयलाई कठोर बनाएर ती स्वर मैले आफ्नो रेकर्डरमा कैद गरेँ । तर, केही दूरीमा रहेको चितामा उनको शरीर जलिरहेको थियो । धुवाँकाे लप्काेले आकाश छुन आँटेकाे थियाे । सायद उनी हामी सबैलाई सधैँका लागि छोडेर परलोक जाँदै थिइन् ।
अब समाचार उमाले पढ्दिनन् भन्ने मलाई विश्वास लागेकै थिएन । तर, सत्यको आभास हुनेबित्तिकै मर्माहत भएँ । उमाले त अब रेडियोबाट मात्रै होइन, संसारबाटै बिदा लिइसकेकी थिइन् । यसरी निहत्थाको कलम र आवाजलाई नृशंसतापूर्वक सधैँका लागि बन्द गरियो ।
उनको मृत्यु भएदेखि नै एकचोटि फेरि उनीसँग भेट्ने मेरो प्रवल इच्छा छ । उनीसँग धेरै नै सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र महिला हकअधिकारको सम्बन्धमा कुरा गर्नु छ । मलाई लाग्छ, उनले मेरो यो आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने छैनन् ।
पत्रकारितामा मानसम्मान खोज्नु हुँदैन । सबैसँग सहज रूपमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । यस्तो स्थितिमा उनी कसरी आउन सक्थिन् ? पत्रपत्रिका, कार्यालय तथा धर्ना जुलुसमा राखिएको उनको तस्वीरतर्फ म हेर्दै थिएँ र उनी पनि हेर्दै थिइन् । धैर्य र शक्ति सञ्चय गर्दै उमाको पत्रकारिताको अभियान रथलाई अगाडि बढाउने बाचाका साथ स्मृतिका क्षणहरू सँगाल्दै छु ।
यति मात्रै कहाँ हो र ? सत्य, अहिंसाको संस्कृति तथा सन्तको शहर जनकपुरधाममा जनकपुर टुडे सञ्चार समूहका सञ्चालक तथा सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियाँको पनि हत्या भयो । एक पछि अर्को कलमवाहक तथा कलमका समर्थकहरूको हत्या गरिनुले हाम्रो संस्कृतिलाई गिज्याएको अनुभव हुँदै छ । राज्य सरकार, सुरक्षा संयन्त्रप्रति नै आक्रोश उत्पन्न हुन्छ । अब रोकिनुपर्छ जनकपुरमा हत्या, हिंसाका शृंखला । र त अहिले नाङ्गो तलबारमाथि जनकपुरधामको पत्रकारिता हिँडेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यसरी उमा सिंहको हत्या भएको १२ वर्ष बिते पनि पत्रकार, पत्रकारिता, महिला पत्रकार, सञ्चार जगत्‌का समस्या स्थानीयस्तरमा ज्यूँका त्यूँ छन् । भलै सञ्चार जगत्‌मा भएको अकल्पनीय विद्युतीय माध्यमको प्रयोगले यसलाई विकसित तथा प्रभावकारी बनाइए पनि अझै यसका वस्तुगत समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन । क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरू अझै असुरक्षाको बोध गर्दै छन् । उनीहरूले आर्थिक असुरक्षादेखि लिएर रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पनि ज्यान मार्ने धम्कीसमेत खेप्दै आएका छन् ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल आदिमा यिनै विषयवस्तुले प्राथमिकता पाएका छन् । सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्नका लागि राज्यले अंकुश लगाउँदै छ । धमाधम सञ्चारसम्बन्धी विधेयक, ऐन, नियमहरू संघदेखि प्रदेशसम्म पनि पास हुँदै छन् । तर पनि पत्रकारको आर्थिक समृद्धि, जीउधनको सुरक्षाका लागि अग्रसरता देखाइँदैन । सूचनाको हकको प्रत्याभूति जनताले त के पत्रकारले पनि पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले दिएका सूचनाको हककाे निवेदनलाई जनप्रतिनिधिहरूले टेरपुच्छर लाउँदैनन् ।
जति महिलाहरू पत्रकारिता पेसामा प्रवेश गरेका छन्, तीमध्ये थोरै मात्र यो पेसामा टिकेका छन् र तीमध्ये थोरैले मात्र राम्रो अवसर पाएका छन् । हरेक सञ्चार संस्थामा नेतृत्वदायी तहमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । जब नीति निर्माण तहमा उनीहरूको सहभागिता नै छैन भने यसका अवयवहरू कसरी लैंगिकमैत्री बन्न सक्छन् । यिनै र यस्तै सवालका साथ उमा सिंहलाई सम्झिँदै मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा बहस जारी छ ।
यस्ता बहसहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर कार्यान्वयनको पक्षमा जोडदार वकालत गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । यसरी उमा शहीद भए पनि यहाँ विभिन्न बहानामा हरेक क्षण सञ्चारकर्मीको घाँटी निमोठिँदै छ, बेलैमा सर्तक रहन जरुरी छ ।